हाम्रै पालामा राजमार्ग क्षेत्रमा शितलचिनी रोपेर हरियाली बनाउछौँः अभियन्ता रुपाखेती - Dhading Sanchar
धादिङ १६ भाद्र ।
सामाजिक काममा सक्रिय हुदै आउनु भएका सामाजिक अभियन्ता तथा चन्द्रज्योती एकिकृत ग्रामिण विकास समाज (सिड्स) नेपालका कार्यकारी निर्देशक गोकर्ण रुपाखेती अहिले राजमार्गलाई हरियाली बनाउने अभियानमा जुट्नु भएको छ । पृथ्वीराजमार्गको ६८ किलोमिटर भित्रका खालि जग्गामा अहिले शितलचिनी लगाउने अभियान सुरु भएको छ । गोकर्ण रुपाखेतीकै नेतृत्वमा राजमार्ग क्षेत्रका स्थानीयतह सँग समन्वय र सहकार्यमा शितलचिनीको विरुवा वितरण भईसकेको छ । गोकर्ण रुपाखेतीसँग धादिङ सञ्चारले गरेको कुराकानीः
१.पछिल्लो समय ग्रिन र क्लिन राजमार्ग बनाउने अभियानमा लाग्नुभएको छ यसको उद्देश्य के हो ?
विशेषगरी धादिङ जिल्लामा नेपालको मुख्य राजधानी काठमाण्डौँ जाने मुख्य नाकाको रुपमा रहेको पृथ्वी राजमार्ग छ ।जुन ८६ किलोमिटरको राजमार्ग धादिङमा पर्दछ । यो दुरिमा भएका यसका पाखा जमिनहरु अहिले भईरहेको विभिन्न प्रकारका विकास निर्माणका कामहरुले गर्दा राजमार्गको संरचनानै विग्रने अवस्थामा पुगेको छ । यो क्षेत्रको जगेर्ना गर्न सामाजिक रुपमा नै जागरण संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुसका साथ यो अभियानमा लागेका छौँ । हामीले धादिङ जिल्लामा रहेको पृथ्वी राजमार्गलाई ग्रिन र क्लिन राजमार्ग बनाउनको लागी यो अभियानमा लागेका छौँ ।
हाईवे क्षेत्रमा रहेका होटलहरुलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै हामीले २ं०२० को नेपाल सरकारको पर्यटन वर्ष जुन रहेको छ त्यसलाई पनि लक्षित गरेर यो अभियानमा लागेका छौँ ।यसबाट हामीले धादिङमा पनि बाहिरका पर्यटकहरु भित्र्याउन सक्छौ र त्यसपछि उनीहरुहरुले आफ्नो ठाउँमा गएर धादिङ जिल्लाको पनि प्रचार–प्रसार गर्नेछन् । यो कार्यले धादिङको विकासमा पनि सहयोग पुर्याउने भएकोले नेपाल सरकारको पर्यटन वर्षलाई पनि लक्षित गरेर यो अभियानमा लागेका हौँ । यसमा मेरो मात्र नभएर धादिङका जनप्रतिनिधि भूमी त्रीपाठी,नेकपा नेता नेत्रराज पौडेल लगायतका व्यक्तिहरु बीच सल्लाह भयो र सोहि सल्लाह मार्फत हामी सबै एकजुट भएर यो अभियानमा लागेका छौँ ।
२.हरियाली राजमार्ग बनाउने अभियानमा लाग्नुभएको छ, त्यसमा पनि यो शितलचिनीकै विरुवा किन रोप्नुपर्छ ?
शितलचिनी लाई गाउँघर तिर मोरिङ्गा पनि भनेर चिनिन्छ । यो एउटा बहुउपयोगी र स्वास्थ्यको हिसाबले पनि धेरै राम्रो विरुवा हो । यसबाट आय आयआर्जन पनि गर्न सकिने भएकोले हामीले यो विरुवालाई रोप्न बढि जोड दिरहेका हौँ । मोरिङ्गाबाट मानव शरिरलाई आवश्यक पर्ने ९० प्रकारका पोषण तत्वहरु पाईने रहेछ । यसबाट हामीलाई धेरै फाईदा छ । यसको पातको प्रयोगबाट मात्र हामीलाई यति धेरै फाईदा हुन्छ । त्यसैगरी यसमा कोसा पनि फल्छ यसको दाना ईन्डियाबाट ल्याएर नेपालमा ८ हजार रुपैयामा विक्रि भईरहेको छ । त्यसको दानाबाट तेल उत्पादन गर्न सकिने रहेछ ।
त्यो तेल व्युटीपार्लरहरुमा प्रयोग हुदाँ रहेछन् । यो विरुवाबाट हामीले फाईदा नै फाईदा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले हामीले यो विरुवा रोप्ने र हुर्काउने विषयलाई विशेष जोड दिएका छौँ । सम्बन्धित निकायलाई हामी के भन्छौँ भने यो विरुवा रोपेको स्थानमा अन्य खेती पनि गर्न सकिन्छ । यो विरुवाले अन्य विरुवालाई पनि प्रोटिन उपलब्ध गराउँदछ । यो विरुवा धादिङ जिल्लामा राम्रोसँग हुर्काउन र उत्पादन पनि लिन सकिने भएकोले यो विरुवा रोप्नको लागी म सबैलाई सल्लाह पनि दिन्छु । यसबाट प्रदुषित हावालाई पनि शुद्ध बनाउन सकिन्छ ।
३.यति धेरै उपयोगी विरुवाको बारेमा यो भन्दा पहिले जानकारी नभएर कि किन यसको प्रयोग गर्न सकिएको थिएन ?
यो विषयमा नेपालमा धेरै खोजी हनु सकेको छैन । यसको बारेमा भारतमा व्यापक रुपमा खोजी भएको पाईयो । त्यसैगरी अन्य युरोपिएन देशहरुमा यसको खोजी भएको पाईयो भने नेपालमा यसको खोजी हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले भर्खरै यो उपयुक्त बाली हो भन्ने विषयको बारेमा जानकारी पाएको छ ।
नेपाल सरकारले पनि यो बालीलाई बढाउनेको लागी अहिले भर्खरै लगानी गर्न थालेका छन् । यसको उत्पादनको लागी कुनै प्रकारको विषादि पनि प्रयोग गर्नु पर्दैन यसको उत्पादन कुनै प्रकारको विषादी विना नै यसको उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो धेरै प्रोटिन युक्त विरुवा भएकोले हामीले तातो पानी तताएर पनि यसको पेष्ट हालेर खायौँ भने यसबाट मानिसमा भएको यौनिक समस्याहरु पनि समाधान हुने तत्थ्य प्राप्त भएको छ । यसलाई सजिलैसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ यो विरुवाको पातलाई हामी सजिलै प्रयोग गर्न सक्छौँ । त्यसकारण म नेपाल सरकारलाई पनि अब रोगको औषधि बाड्ने भन्दा पनि नागरीकहरुलाई यो शितलचिनीको विरुवा रोपेर यसको पातको प्रयोग गर्न सिकाउने विषयप्रति जोड दिनुपर्छ भन्छु ।
४.धादिङमा राजमार्ग क्षेत्रको सरसफाईको विषयमा पहिले पनि कुरा भईरहेको थियो । तर तपाईले यो शितलचिनीको विरुवा रोपेर यसको खेती गरेर राजमार्ग क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको बारेमा कसरी जानकारी पाउनुभयो ?
यो मोरिङ्गा फार्मिङको विषयमा कार्वन फार्मस नेपालको डाईरेक्टर रामजी भण्डारीसँग मेरो भेट भयो । उँहा यहि अभियानमा हुुनुहँदो रहेछ । गोर्खामा पनि उँहाले सहकारी मार्फत यहि अभियान चलाउँदै हुनुहुदो रहेछ । त्यस बारेमा जानकारी पाईसकेपछि हामीले यो विषयलाई छलफलको विषय बानउनु पर्छ भनेर मैले धादिङका माननीयहरुसँग कुरा राखे र उँहारुले पनि यो अभियानलाई स्वीकार गरेर अभियानलाई साथ दिनु भएको छ । यसले हामीलाई छोटो समयमा उत्पादन दिन्छ ।
अहिले नेपाल सरकारले वातावरण परिवर्तनको लागी विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका बृक्षरोपणको काम गरी राखेका छन् । त्यसकारण नेपाल सरकारको अभियानलाई पुरा गर्नको लागी हामीले शितलचिनीको विरुवा छिटो समयमै हुर्कने र यसले हाम्रो वातावरण परिबर्तनको लक्षलाई पनि छोटो समयमा नै पुरा गर्न सहयोग गर्ने भएकोले यसबाट हामीले ठूलो आम्दानीका साथै वातावरणलाई पनि स्वच्छ राख्न सकिने भन्ने विषयको बारेमा जानकारी पाएँ र म यो अभियानमा लागेको छु ।
५. शितलचिनी विरुवाको विषयमा धादिङका मानिसहरुमा भर्खरै केहि जानकारी भएको छ । अरु जिल्लाहरुमा पनि यसको खोजी हुन थालेको छ ? यसलाई अब किसानसँग जोड्नुपर्छ भनीरहँदा सहयोग र सपोर्ट कत्तिको पाउनुभएको छ ?
यसको लागी मैले जँहा गएर कुरा गर्दा पनि सबैले राम्रो र यसको विकासमा हामीले पहल गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारका कुराहरु गर्छन् । यसको लागी माननीय मन्त्रीसँग पनि मैले कुरा राखेको थिएँ । उहाले पनि तपाईँहरु आउनुस् म अर्को वर्ष यो कार्यक्रम राख्छु भन्नुभएको छ ।अनि मैले जहाँ गएर जसलाई सोधेपनि यो राम्रो विरुवा हो । यो हामीले प्रयोग गरी राखेका छौँ भन्ने प्रकारका कुरा गर्छन् । अहिले मलाई लाग्छ कल्लेरी र बैरेनीको तल्लो भेगका मानिसहरुले एउटै विरुवाबाट ५ हजारसम्म आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ । उँहाहरुले यसबाट आम्दानी लिरहनु भएको छ । एक रोपनी जमिनमा हामीले ५० देखी ६० वटा विरुवा रोप्न सक्छौँ । त्यसलाई अन्य खेतीलाई जती दुःख पनि गर्नुपर्दैन । यसबाट हामीले सजिलै आम्दानी लिन सक्छौँ । यो विरुवाबाट हामीले वर्षमा २ पटक उत्पादन लिन सक्छौँ । यो विरुवा हामी मानव जातीको जीवनमा सर्वव्यापी रुपमा प्रयोग हुने विरुवा भएकोले यो उत्पादनको बारेमा सबै नागरीकहरुलाई जानकारी गराउनको लागी पहल हामीले नै गरेका हौँ । यसका प्रयोग हामी सबैले गर्न सक्यौँ भने हाम्रो नेपाल सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन योजना रहेको छ , त्यो लक्षलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ ।
यो कार्यले हाम्रो देशमा रहेको बाँझो जमिनहरुमा पनि यो विरुवालाई सजिलैसँग रोप्न सकिन्छ ।यसको लागी मैले विभिन्न गाउँपालिकासँग पनि कुरा राख्दा हामीसँग यो वर्ष यसको लागी बजेट छैन अर्को वर्ष हामी यसको लागी पनि बजेट छुट्याउने छौँ भनेका छन् । मेरै पहलमा यो वर्ष मात्र धादिङमा १२ हजार सितल चिनिको विरुवा रोपी सकीएको छ । जसमा सबै विरुवाहरु सरी सकेको छ । जसमध्ये २ सय विरुवा मात्र मरेको मलाई रिपोर्ट आएको छ । यसको लागी हाम्रो अर्को सोचँपनि रहेको छ । हामीले यसको पेष्ट बनाउने उद्योग पनि धादिङमै निर्माण गर्ने योजना बनाइका छौँ । यसबाट नागरीकहरुलाई रोजगारी पनि प्रदान हुने छ । यसको लागी हाम्रो मात्र पहलले सफल हुदैन । राज्य संयन्त्रले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । धादिङका सम्पूर्ण स्थानमा यसको उत्पादनको लागी हामी पहल गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ ।
६.यो शितलचिनीको विरुवा बहुउपयागी विरुवा हो र जती पनि व्यक्तिहरुले यो कार्यक्रम सुनी रहनुभएको छ उँहाहरुलाई पनि यो विरुवा सार्न मन लाग्यो भने के गर्न सकिन्छ ?
यो वर्षमा अनुदान दिने मेरो कार्यक्रम सकिएको छ । १० हजार विरुवा वितरण गर्ने मेरो योजना रहेको थियो । त्यसमा मैले १२ हजार विरुवा वितरण गरे । यसमा मैले किसानहरुसँग प्रत्येक विरुवाको ५ रुपैया लिएँ । मैले यो नाफा लिएको होइन । यो ५ रुपैयाबाट अरु १५ सय विरुवा थपेर अन्य किसानहरुलाई पनि बाडेँ । किनकि मलाई जसरी हुन्छ यसको प्रसार–प्रचार गर्नु थियो । किसानको माग सम्बोधन गर्ने मेरो उद्देश्य हो । मैले प्रति रुपैयाँ ४० तिरेर ल्याएको विरुवा ५ रुपैँयामा किसानहरुलाई दिलाएको छु । यो भएपछि किसानहरुलाई विरुवाप्रति माया पनि हुन्छ । यसबाट किसानहरु पनि खुसी हुनुहुन्छ ।
यो थप विकास गर्दै लैजानको लागी मैले सरकारी निकायसँग पनि कुरा राख्ने छु । यसको लागी हाम्रो तीनवटा अवधारणा रहेको छ । अब धादिङ जिल्लामा ठूलो त्रिसुली बगीरहने,महेश खोला बगीरहने,आरे खोला बगीरहने छुट हुँदैन अब त्यो पानीलाई किसानको फाँटसम्म पुर्याउनुपर्ने छ । यो भयो भने किसानहरु आफैले विकास गर्नेछन् । आर्थिक समृद्धिको लागी राजमार्ग क्षेत्रका युवाहरुलाई म आवद्ध गर्न सक्छु । यसको लागी मलाई राजनितिक व्यक्तिहरुले सहयोग गर्नुपर्ने हुुुुुुुन्छ । यो प्रकारको योजनाका साथ हामी जान सक्यौँ भने हामीले धादिङको विकास छिट्टै गर्न सक्छौँ र धादिङ जिल्लालाई छुट्टै प्रकारको अवधारणामा लैजान सक्छौँ । यसको लागी प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो घरमा व्यवसाय गर्नुपर्नेछ ।
७.सिड्स नेपाल धादिङले अहिले के गरीरहेको छ ?
सिड्स धादिङ अहिले कार्यक्रमको हिसाबले विशेषगरी सामाजिक विकासका कामहरु गरी रहेको छ । त्यसैगरी बाल संरक्षणका कामहरु गरी राखेका छौँ । हामी सामाजिक एजेन्डाका विषयहरुलाई ईमान्दारीपूर्वक अगाडी बढाउँदै आएका छौँ । त्यसकारणले होला हामीले अहिले ठुला–ठुला डोनरका कार्यक्रमहरु पार्न सकेनौँ । त्यो भित्र विभिन्न प्रकारका नकारात्मक प्रकारको काम पनि हुने भएकोले हामीले त्यस्ता प्रकारका कामहरुलाई अस्विकार पनि गरेका छौँ । विकासमा युवा नेतृत्वका कामहरु गरी राखेका छौँ । त्यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट समाजलाई रुपान्तरित गर्ने योजनाका साथ हामी काम गरी राखेका छौँ । युवाहरुको सहभागीताको माध्यमबाट कृषिमा आमुल परिवर्तनको योजनामा लागेका छौँ ।
८.अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
सम्पूर्ण धादिङबासीहरुलाई तपाई राज्यले केहि दिएन भन्ने विचारमा होइन । म केहि गर्न सक्छु भन्ने विचारका साथ अघि बढ्नुस भन्छु । अब हामी कहाँ के पाइन्छ भन्दा पनि हामी आफै केहि गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढौँ भन्छु ।